Yan Aung: March 2007
နာမည်စာရင်းတွေနဲ့ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ အကြမ်းဖျင်းပါ. လောလောဆယ် Active မဖြစ်သေးပါဘူး.
အားလုံး ၁၆ ယောက်ပါ။
၁. ရသ၊သုတ စာမူရွေးချယ်ရေး
၂. နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စာမူရွေးချယ်ရေး
၄. ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲရေး
၅. စာမူနှင့် သတင်းဘလော့ဂ်များကို ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး
၁. ရသ၊သုတ စာမူရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့
ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေကို ပိုကောင်းအောင် ပြန်ပြီး စီစဉ်ဖွဲ့ပေးတာမျိုးကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ.အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက ကျွန်တော့်ကို email address မပေးရသေးသူများ aungyan@gmail.com ကို ပို့ပေးကြပါ ခင်ဗျာ. လက်ဖက်ရည်တိုက်ပါမယ်။ ကံစမ်းမဲလေးပေးပါမယ်။ ပြည်ပက ဘလော့ဂ်ဂါများ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ် ခရီးစဉ် ကိုယ်တိုင်ဝယ် လက်မှတ်စနစ်ချီးမြှင့်ပါမယ်။ ပြည်တွင်းက ဘလော့ဂ်ဂါများအတွက် ကံစမ်းမဲကတော့ ဆိုက်ဘေးရီးယားကို ဆောင်းရာသီ အပျော်စီးသဘောင်္လက်မှတ် ပေးပါမယ်။
အားလုံးကို confirm ဖြစ်ရင် သတင်းဘလော့ဂ်မှာ အတည်ပြု ကြေငြာပါမယ်။
ကိုဇင်ကိုလတ်က အီတလီ နန်းကြီးသုတ်နဲ့ Appetizer ကျွေးပါမယ်။ (Pasta လို့ ခေါ်ပါတယ်)
ကိုဝေယံလင်းကတော့ ပြင်သစ်ပုံစံ အ၀စား နေ့လည်စာ ကို တည်ခင်းဧည့်ခံပါမယ်။ (ဘူဖေးလို့ ပြောကြတာပဲ)
ညလေးကတော့ ခြေဖျားလေးထောက်ပြီး စကတ်တိုလေးနဲ့ကတဲ့ အနောက်တိုင်းပုံစံ ကကွက်ဆန်းနဲ့ ဖျော်ဖြေပါမယ်။ (ဘဲလေး လို့ သတ်မှတ်တဲ့ အကတစ်မျိုးပါ)
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
မဲဆောက်နယ်စပ်မှာ မယ်တော်ဆေးခန်းကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိလည်း အားကိုးရာမဲ့သူတို့ရဲ့ အရိပ်အာဝါသသဖွယ် ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားဘဲ မိခင်ရင်း အလားစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော် အရမ်းကို လေးစားကြည်ညိုရတဲ့ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့ အတ္တုပ္ပတ္တိစာအုပ်လေး တစ်အုပ်ပါ။
ခေတ်ပြိုင် website ပေါ်ကနေ တွေ့လို့ Download လုပ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခင်အားပေးနေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ…
မြန်မာ ဘလော့ဂ်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကော်မတီနဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်အကြား ဆက်သွယ်ပြန်ကြားပေးမယ့် သတင်းဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသတင်းဘလော့ဂ်အတွက် Volunteer များ အလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ. စိတ်ပါဝင်စားသူများ သတင်းဘလော့ဂ်တွင်ရေးထားသော Announcement ကို ဖတ်ရှုပြီး bloggermedium@gmail.com သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..
ဘလော့ဂ်လိပ်စာကတော့ http://mmbloggernews.blogspot.com/ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ သီချင်းလေးတွေ ထည့်ပြီးလာလည်တဲ့ သူတွေကို Entertainment Center လေးတစ်ခု လုပ်ပေးချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပို့စ်လေးကို ရေးပါတယ်ခင်ဗျာ..
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးဆိုသလိုပဲ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ music player ကို အမျိုးမျိုးသော site တွေကို သုံးပြီး တင်ထားတတ်ကြပါတယ်။
၁. ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ သီချင်းကို File Hosting Website တစ်ခုခုမှာ အရင်ဆုံး upload လုပ်ရပါမယ်။
၂. အဲဒီ့ သီချင်းတွေရဲ့ URL ကိုယူရပါမယ်
၃. Music Player မှာ သီချင်းတွေရဲ့ URL ကို ထည့်ရပါမယ်။
၄. အားလုံးပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ Music Player ရဲ့ URL ကို ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ ထည့်ပေးရပါမယ်.
အဲဒါ Music Player တင်ချင်သူတွေအတွက် အခြေခံ အချက်တွေပါပဲ။ ကျန်တာတွေကတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကွန့်ထားကြတာပါ။ တစ်ချို့ကျတော့ Flash Picture လေးတွေကို Background မှာထားပြီး Music Player လေးတွေ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြိုးစားသင်ယူသွားပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ…
ဒါကတော့ File Hosting Website တွေထဲက အသုံးများတာ တစ်ချို့ပါ။
www.fileden.com, www.ripway.com, www.filexoom.com
ဒါကတော့ ကျွန်တော်ခုသုံးနေတဲ့ Music Player ရဲ့ Website ပါ.
Account တစ်ခုလုပ်ပြီးရင် ကြိုက်တဲ့ Music Player Design လေးတွေကို ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ သီချင်းတွေကို upload လုပ်၊ URL လာထည့်ပေးပါ။ ရွေးလို့ရနိုင်တဲ့ Music Player လေးတွေရဲ့ sample လေးတွေနဲ့ screenshot တစ်ချို့ကို အောက်ကပုံမှာ ကြည့်ပါ။
တစ်ခြား Music Player တွေကို သုံးချင်လည်းသုံးပါ။ idea ကတော့ တူတူပါပဲ။
ဒါကတော့ ကိုဖိုးချမ်း (CMS) ရဲ့ သီချင်းတင်နည်းပါ။ အင်မတန်ကို ရိုးရှင်းပြည့်စုံကောင်းမွန်ပါတယ်။
အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ တစ်ခု အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်တစ်ချို့မှာ ၀င်လိုက်တာနဲ့ သီချင်းလေးတွေ တက်လာတာ ကြုံဖူးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့က ကြိုက်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ နည်းနည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ပိုကောင်းတာကတော့ လာတဲ့ visitor တွေကို ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေးလိုက်ပါ။ သူနားထောင်ချင်ရင် သူ့ဘာသာသူ click ခေါက်ပြီး ကြိုက်တဲ့ သီချင်းနားထောင်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ဒီတိုင်းပဲ စာဖတ်ပြီး သူပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ့အတွက် Mp3 Player ရဲ့ coding တစ်ချို့ကို ပြင်ပေးရပါမယ်။ ကိုယ်သုံးတဲ့ player အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ခုကျွန်တော်ပြောမယ့် coding တစ်ချို့ ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် autostart/autoplay စတာတွေကတော့ တူတူပါပဲ။ မပြောင်းပါဘူး။ ရှာကြည့်ပါခင်ဗျာ…
src="yourfile.mp3" autostart="true" hidden="false" loop="false" width="20%" height="40px"....
၁. autostart="true" (or) autoplay= “true” ဆိုရင် သီချင်းကို Autoplay လုပ်ပါတယ်။ false ပေးလိုက်ရင် မလုပ်တော့ပါဘူး။
၂. hidden="true" ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ player ကို hide လုပ်ထားပါတယ်။
၃. loop="true" ဆိုရင် သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဖွင့်ပေးနေပါလိမ့်မယ်။
၄. width="20%" , height= “40 px” စတာတွေကတော့ player ရဲ့ Dimension ပါ
ဒီပို့စ်လေးအတွက် မြန်မာဘလော့ဂ်ဂါဖိုရမ်မှ Admin ကြီးနဲ့ ကိုဖိုးချမ်းတို့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဒီနေရာကနေ ပြောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာ…
ငယ်ငယ်တုန်းက သိပ်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိသတ်အတွက် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ရပါတယ်…
နွေအလယ် နေပူရင် ချစ်ခြင်းသဘောတွေ…
အိုး… တောင်ပြာတန်းရိုး မိုးစက်မှောင်ရင်…
တို့ရဲ့စိတ်တွေ ပြေးသွားခဲ့ပြီ မင်းတစ်ယောက်ရှိတဲ့ဆီ…
မညှာမတာ မိုးခက်များ ငါ့ကိုလေ…
ရိုက်နှက်လို့ မသွားအောင် ကူညီလို့ပေးတယ်…
ရေပြင်လို ငါ့အထက်ကပ်လျက် ရပ်ခဲ့သူရေ…
နွေအလယ် ပျံကာနေတဲ့ ငှက်ကလေးများတို့ရယ်...
ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြစ်တွေ သိမ်းထားခဲ့ပြီ သူ့ရဲ့ နှလုံးသားဆီ…
ဆုံးစမဲ့ လမ်းက မတွေ့ပေမယ့်
ဘလော့ဂ် တွေရေးတဲ့ အခါမှာ Post တွေများလာတာနဲ့အမျှ ဖတ်တဲ့သူ အဆင်ပြေအောင် ကိုယ့်ရဲ့ post တွေကို သေသေချာချာ စီစဉ်လာရပါတော့တယ်။ Label ခွဲတာတို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ Site ထဲမှာ ရှာလို့ရအောင် Search Engine ထည့်ပေးတာတို့ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ။ ဘလော့ဂ် တော်တော်များများမှာ အဲဒီ့ Function တွေကို ကြိုးစားထည့်ပေးထားကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် မှာ စာဖတ်သူတစ်ယောက်က ရှာဖွေဖတ်ရှုနေရင်းကနေ မူရင်း page ကို ပြန်သွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Previous Page တို့၊ Next Page တို့ကို ဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ချင်သလို ဖတ်လို့ရအောင် Navigation Icon (လမ်းညွှန်ပုံ) လေးတွေ ထည့်ပေးနိုင်ရင် အရမ်းကို အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာက အဲဒီ့ icon လေးတွေကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုထည့်လို့ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။
ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ် ထဲကို sign in ၀င်ပြီး template tab ကိုရွေးပါ။ Edit HTML ကိုဆက်ရွေးပါ။ ပြီးရင် Expand Wiget Templates ဆိုတဲ့ Box လေးကို tick လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ <b:includable id='nextprev'> ဆိုတဲ့ code လေးကို template ထဲမှာ လိုက်ရှာပါ။ ဒီပုံစံမျိုးလေး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီ့ code တွေကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အစားထိုးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ icon လေးတွေကို ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။
အဲဒီ့ icon လေးတွေကို post လေးတွေရဲ့ ထိပ်မှာပေါ်နေစေချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ template ထဲမှာ တတိယမြောက် စာသားလေးတစ်ကြောင်းကို ထည့်ရိုက်ပေးရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့ဂ်က ပို့စ်လေးတွေ အပေါ်မှာ ဒီလိုပုံစံလေး ပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Icon လေးတွေကို အရောင်ပြောင်းပြီး သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ left.gif, right.gif, home.gif နေရာတွေမှာ အောက်ပါအတိုင်း အစားထိုးပေးပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် ဆွဲထားတဲ့ icon လေးတွေကိုလည်း အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ icon လေးတွေကို file hosting website တစ်ခုခုမှာ အရင်ဆုံးတင်ထားပြီး URL Link ထုတ်ထားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီပို့စ်လေး ကို သင့်တော်သလို ဘာသာပြန်ဆို ရေးသားထားပါတယ် ခင်ဗျာ...
IELTS Exam ကို ဖြေဖို့ စဉ်းစားနေသူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်အနေနဲ့ ပေးချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးဝင်မယ့် စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ပါ…
ဒီသတင်းကိုဖတ်လိုက်ရတာ အိပ်ချင်နေတဲ့ မျက်စိတွေတောင် ပြူးထွက်သွားတယ်. တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူးဗျာ. တော်တော်ခံစားရရှာမှာပဲလို့ ကိုယ်ချင်းစာဖို့တောင် တော်တော်စဉ်းစားယူရလိမ့်မယ်…
တစ်စုံတစ်ရာ ငါ့ဆီကို ရွေ့လာနေတာကို ခံစားမိတယ်
ဖွင့်ကြည့်မိမှ တကယ်မရှိတာဖြစ်နေမှာကိုလည်း ငါစိုးရိမ်နေမိတယ်.
ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရင်ခုန်သံကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်.
လျှပ်စီးလက်တာထက်မြန်မယ့် အရှိန်အဟုန်မျိုးနဲ့ ငါ့ရဲ့ မျက်ခွံ နှစ်ခု ဝေးကွာသွားခဲ့တယ်
အပြင်မှာလည်း ဘာမှ မရှိပါလား..
ကျွန်တော် Gtalk မှာ ကိုစိုးဇေယျ၊ ကိုဇင်ကိုလတ်၊ ကိုဝိုင်ချို (ကိုကျော်ဇေယျ) တို့နဲ့ စာအုပ်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်. ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ idea တစ်ချို့ပါ.
Volunteer များအနေနဲ့ ပြည်တွင်းကလား၊ ပြည်ပကလားဆိုတာကို ကျွန်တော့်ကို အသိပေးစေချင်ပါတယ်. ဒါမှ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုလက်တွေ့ကျမှာမို့ပါ...
Group3ခုဖွဲ့ပါမယ်.
1. Local Group
3. Campaign Group
1. Ko Soezeya
2. Ko SaturnGod
4. Whoever wants to join...
1. Ko Zin Ko Latt
2. Ko Wine Cho (Kyawzayya)
3. Ko Myo Chau Htun
4. Ko Myat Min Han
5. Ko Wai Yan Lin
6. Yan Aung
7. Whoever wants to join...
2. Ko Shwe Mann
4. All members from both Local and Global Group
5. Whoever wants to join...
- ရန်ပုံငွေ ကောက်ခံရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းရေး
- စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးနှင့် ဆင်ဆာကိစ္စ
- ရန်ပုံငွေ ကောက်ခံရေး၊ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြည်တွင်းသို့ အခက်အခဲမရှိ ငွေလွှဲနိုင်ရေး
- Local and Global Bloggers တွေရဲ့ Blog တွေကို လိုက်ကြော်ငြာရေး
- ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Seminars/Advertisements လုပ်ရင်း လူသိများအောင် ကြော်ငြာရေး
- စာရေးကောင်းသူ Blogger များကို စည်းရုံးနိုင်ရေး
Communication (Group များ အကြား ဆက်သွယ်မှု)
Group ကို ၃ ခုခွဲထားရတာက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်မယ့် အတိုင်းအတာနဲ့ အင်အားပေါ် မူတည်ပြီး လက်တွေ့ဆန်ဆန် စဉ်းစားပေးထားတာပါ. တာဝန်တွေကို လိုသလို ထပ်ဖြည့်သွားပါမယ်. member တို့က အကြံဥာဏ်ဝိုင်းပေးကြပါ. ကျွန်တော် update အမြဲ လုပ်ပေးသွားပါမယ်. တစ်ခုခုကို လုပ်ချင်ရင် စလုပ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးမို့ ကျွန်တော် စလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီလို့သာ မှတ်ယူပေးစေချင်ပါတယ်.
အချက်အလက်တွေ၊ Communication System တွေကို ပိုပိုကောင်းလာအောင် ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ Group3ခုလုံးက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အတူတူလက်တွဲပြီးလုပ်သွားကြမှာပါ.
စာမူရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စကို ကျွန်တော် နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆွေးနွေးပါမယ်.
ဒါက အကြမ်းဖျင်း Data ပါ. ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါ...
၁. စာအုပ်ကို ၆ သိန်းနဲ့ ၈ သိန်းဝန်းကျင် ကုန်ကျမယ် ခန့်မှန်းပါတယ်
၂. တစ်ယောက်ကို ၃ သောင်း အချိုးကျထည့်ဝင်ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Blogger ၂၀ ကနေ ၂၇ ယောက်ထိလိုပါတယ်.
၃. စာအုပ်ကို စာမျက်နှာ ၁၆၀ ပါချင်တယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းပါတယ်.
၄. အဲဒီ့အတိုင်းဆိုရင် Blogger တစ်ယောက်ကို ၆ မျက်နှာကနေ ၈ မျက်နှာ အကြမ်းဖျင်းရပါမယ်.
(နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်တွေ ဘာညာသာရကာတွေအတွက်တော့ ၄~၅ မျက်နှာပေးရပါမယ်...)
Reality (လက်တွေ့ အခြေအနေများ)
၁. Blogger တစ်ချို့က ကိုယ့်ရဲ့ စာမူကို ထည့်ဖို့၊ ရေးဖို့ တုံ့နှေး၊ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေကြတယ်.
၂. တစ်ချို့ကတော့ ကိုယ့်စာမူလေးတော့ပါချင်တယ်၊ ဖြစ်မှဖြစ်ပါ့မလား. ဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်
၃. တစ်ချို့ကတော့ တကယ်ကို စိတ်မ၀င်စားတာပါ.
Limitations (အကန့်အသတ် အတားအဆီးများ)
ကျွန်တော် Backward Thinking လုပ်ပြချင်ပါတယ်.
၁. ကျွန်တော်တို့ စာအုပ်ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံလိုပါတယ်
၂. ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် Blogger တွေရဲ့ support နဲ့ interest လိုပါတယ်
၃. အဲဒီ့ support နဲ့ interest ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဖြစ်န်ုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို ပေးဖို့လိုပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ရေးန်ုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ အားပေးမှုကိုလည်း လိုအပ်ပါတယ်
၄. အဲလိုပေးန်ုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့မှာ သတင်းပြန်ကြားရေးလို့ ခေါ်ရမယ့် စာမူလက်ခံမယ့် Blog လိုပါတယ်. (Create လုပ်ပြီးပါပြီ. စာမူတွေတော့ သိပ်မတင်ရသေးပါ.)
၅. အဲဒီ့ Blog ကို လူသိများအောင် Campaign Group က လုပ်ရပါမယ်. တစ်ခြား member တွေကလည်း individually လုပ်နိုင်ပါတယ်
၆.စာမူ Blog ကို ၀င်လာကြည့်တဲ့ Blogger တွေ ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားအောင် ကျွန်တော်တို့ဘက်က တစ်စုံတစ်ရာကို အကောင်အထည်ဖော်ပြနိုင်ထားဖို့လိုပါတယ်. (ဒီကိစ္စက ကျယ်ပြန့်ပါတယ်. အသေးစိတ် ထပ်ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်)
၇. ဒီလို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် စာမူတွေလိုပါတယ်.
၁. ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ စာမူရွေးချယ်တဲ့ အပိုင်းကို မသွားခင် စာမူရဖို့ အပိုင်းကို အရင် ဦးတည်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Blogger များများပါဝင်လာအောင် ကြိုးစားပါမယ်
၂. အဲလို တစ်ပြိုင်တည်း ကြိုးစားနေစဉ်မှာပဲ Blog ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ စာမူတွေကို ၀ိုင်းဝန်းအကဲဖြတ် ရွေးချယ်ကြပါမယ်. လူများများ ၀င်ဖတ်လေ. အကြံဥာဏ်ပိုပြည့်စုံလေဖြစ်ပြီး အကြံပေးတဲ့သူတွေလည်း ကျွန်တော်တုိ့ရဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေး အစီအစဉ်မှာ စိတ်ဝင်စားလာပါလိမ့်မယ်.
၃. စိတ်ဝင်စားပြီး ပါဝင်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလာသူများကို Locally/Globally ပိုက်ဆံကောက်ပါမယ်.
Brainstorming (၀ိုင်းဝန်း အကြံပြုစဉ်းစားရန်)
၁. Blog စာအုပ်အတွက် ပိုက်ဆံထည့်တဲ့သူပဲ စာမူထည့်သင့်ပါသလား
ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ၊ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ.
ဘယ်ဟာက ပိုပြီး လက်တွေ့ဆန်မလဲ.
Win-Win Situation က ဘာဖြစ်မလဲ.
၂. စာမျက်နှာ ဘယ်လောက်ပါဝင်သင့်သလဲ
၃. ဘယ်လို Categories တွေကို ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေနဲ့ လက်ခံရွေးချယ်မလဲ.
ဒါက အကြမ်းဖျင်း Game Plan ပါ. ထပ်ပြောပါရစေ. မပြည့်စုံသေးပါဘူး. ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်.
ဒါပေမယ့် စဉ်းစားနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ စာမူတွေကို လက်ခံရရှိနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်. အချိန်ဖြုန်းရာ မရောက်အောင်လုိ့ပါ.
ဒီတော့ ကိုယ်ရေးပြီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခုမှ စရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေးဖြစ်အောင်ရေးကြပါလို့ ကျွန်တော် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်..
လောလောဆယ် ကိုယ်တကယ် Feel လာတာကိုသာ ရေးပါ. ကျွန်တော်တို့ စာမူကို ပရိသတ်နဲ့ပဲ ရွေးမှာပါ. ကျွန်တော်တို့ မရွေးပါဘူး။ ဒီစာမူ ပါသင့်မပါသင့်ကို Feedback ပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးသွားမှာပါ. ကျွန်တော်လည်း ကြိုးစားရေးနေပါတယ်. Technology ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်ချို့ member တွေ ရေးပြီးသားရှိရင် သွားပြီးတင်ပေးစေချင်ပါတယ်.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရောင်းကောင်းချင်ရင် ဆိုင်ကိုလည်းလှအောင်ပြင်ရမှာမို့ပါ. မူပိုင်းကို ပိုကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားသွားပါမယ်. ဆိုင်လေးလှအောင်တော့ အားလုံး ၀ိုင်းကူပေးကြပါလို့ ကျွန်တော် နှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျား...
ဒါမှလည်း ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ အားအင်တွေ ပိုရလာမှာပေါ့ဗျာ မဟုတ်ဘူးလား..
ဒီစာအုပ်ကလည်း အမြတ်ကြေးငွေအတွက် တစ်စွန်းတစ်စမှ မပါပါဘူး။ လူငယ်တွေအတွက် လူငယ်တွေက ပေးတဲ့ ပညာအလင်းတန်းလေး တစ်ခုပါ.
မှောင်လှချည့်လားလို့ စောဒကတက် ငြီးငြူနေမယ့်အစား သင်ကိုယ်တိုင် မီးအိမ်လေးထွန်းပေးလိုက်ပါလား... တဲ့.
ဟုတ်ကဲ့ ဒီ ဘလော့ခ်စာအုပ်လေးဟာ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေက ထွန်းညှိပေးလိုက်မယ့် ဖန်မီးအိမ်လေးတစ်လုံးပါပဲ..
Volunteer အသစ်များကိုလည်း တံခါးဖွင့်ကြိုဆိုနေလျက်ပါ. ကျွန်တော်တို့ Blogger တွေက ညီရင်းအစ်ကို မောင်ရင်းနှမတွေလိုပဲ ဆက်ဆံရေး နွေးထွေးပါတယ်...
ဒါကတော့ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စာမူတွေကို လက်ခံဖော်ပြပေးမယ့် Blog လေးပါ.
ဟုတ်တယ်. သိပ်ရောင်းအားမကောင်းသေးဘူး. member တို့က ၀ိုင်းကူမှာကို မျှော်လင့်နေရှာတယ်ဗျာ...
ဒါကတော့ ဖိုရမ်မှာ ကိုမျက်လုံးလေးရေးထားတဲ့ ဟာသလေးတွေပါ.
စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံတစ်ခု. . .
လူနာ "ဆရာ၊ ဆရာ၊ ကျွန်တော့်အခန်းထဲက ကောင် ရေဇလုံထဲနှစ်ပြီး သူ့ကိုယ်သူ သေကြောင်းကြံလို့ပါ"
ဆရာဝန် "ဟေ၊ ဒါဆိုအခုသွားမှ"
လူနာ "မပူပါနဲ့ဆရာ၊ ကျွန်တော်သူ့ကို ကယ်လိုက်ပါပြီ"
ဆရာဝန် "ဟုတ်လား။ မင်း တော်တော်နေကောင်းလာပြီပဲ၊ ဒီအတိုင်းဆို ဆေးရုံကဆင်းဖို့ သိပ်မလိုတော့ဘူး၊ အခုဟိုကောင် ဘယ့်နှယ်နေသေးလဲ"
လူနာ "ကျွန်တော် သူ့ကိုယ်ပေါ်က ရေတွေစစ်သွားအောင် လည်ပင်းမှာ ကြိုးနဲ့ချည်ပြီး မျက်နှာကျက် ပန်ကာမှာ ချိတ်ခဲ့တယ်ဆရာ"
"ဒေါက်တာ၊ ကူညီပါဦး၊ ကျွန်မသားလေး ခဲဖျက်မျိုချလိုက်လို့"
"ကျွန်မ Correction Pen နဲ့ဖျက်နေရတာပေါ့ဆရာ"
ဒါကတော့ ဖိုရမ်မှာပဲ ညလေးရေးထားတဲ့ ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ပါ.
ကောင်လေး - ငါ့ကိုယုံပါကွာ၊ မင်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယ စိတ်အချမ်းသာဆုံးသူဖြစ်ရမယ်လို့ ငါအာမခံပါတယ်...
ကောင်မလေး - ဘာလို့ ပထမ မဟုတ်တာလဲဟင်...
ကောင်လေး - မင်းရှိနေရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမစိတ်အချမ်းသာဆုံးသူဟာ ငါမို့လို့ပါကွာ...
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က email နဲ့ ပို့ပေးလိုက်တာကို အမှတ်တရအနေနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းနာမည်က ကျွန်တော်နဲ့ တော်တော်တူတယ်ဗျ. ကိုရန်မင်းအောင်တဲ့…
ရဲအရာရှိ။ “No. No. ဘာမှ ပြဿနာမရှိပါဘူး. ခင်ဗျားကားမောင်းသွားတာ အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပါတယ်. ဒါကြောင့်မို့ Safe Driver Award အနေနဲ့ $ 5000 ဆုချမလို့ပါ. ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ. ဒါနဲ့ ဒီဆုကြေးငွေကို ခင်ဗျားဘာလုပ်မယ် စိတ်ကူးထားလဲဗျ.
ဗိုက်ကြီးသည် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ Coma လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါကြောင့် ၆ လလောက် မေ့မျောနေခဲ့ပါတယ်. သူမပြန်လည်သတိရလာတဲ့အချိန်မှာ သူမဟာ ကလေးမွေးပြီးသွားပြီဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်.
စိတ်အရမ်းပူပန်သွားပြီးတော့ သူမကလေးအကြောင်းကို ဆရာဝန်ကို မေးသတဲ့.
ဆရာဝန်။ ။ “စိတ်မပူပါနဲ့ အန်တီရယ်။ အန်တီက ယောင်္ကျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး အမြွှာပူးလေးမွေးတာဗျ. ကလေးတွေအားလုံး နေကောင်းကြပါတယ်. အန်တီ့ရဲ့ အစ်ကိုလာပြီး နာမည်တွေဘာတွေတောင် ပေးသွားသေးတယ်ဗျ.
အမျိုးသမီး။ ။ “ဘာပြောတယ်. ကျွန်မ အစ်ကိုလာသွားပြီး နာမည်ပေးသွားတယ်ဟုတ်လား. သွားပါပြီရှင်. သူက နလပိန်းတုံးရှင့် ဒါနဲ့ မိန်းကလေးကို ဘယ်လို နာမည်ပေးသွားလဲ.”
ဆရာဝန်။ ။ “Denise လို့ နာမည်ပေးသွားပါတယ်”
အမျိုးသမီး။ ။ “မဆိုးပါဘူး. ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မထင်တာ မှားသွားပြီ။ ဒီနာမည်လေးကို ကျွန်မ ကြိုက်တယ်. ယောင်္ကျားလေးကိုရော ဘာနာမည်ပေးသွားလဲရှင်…”
ဆရာဝန်။ ။ “Denephew လို့ပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ…”
ဒီနှစ်အတွက် သင်္ကြန်စာပါ. စင်ကာပူမှာနေတဲ့ ကျွန်တော့် မွေးစားညီမလေးက မနေ့ညကပဲ ပို့လိုက်တာပါ…
တစ်ခါတုန်းက ဂျပန်ပြည်မှာပေါ့လေ ထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်တဲ့.
အသက်ကြီးလာတဲ့ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးတွေကို တောထဲက ဂူတစ်ဂူထဲမှာ သွားထားရသတဲ့ဗျာ. ဆင်းရဲလို့ ပါးစပ်အပိုတစ်ပေါက်ကို မကျွေးနိုင်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ..
အဲ. ရွာတစ်ရွာမှာပေါ့လေ. သားလုပ်တဲ့သူကို သူ့ရဲ့ မိန်းမက ငြူစူစောင်းမြောင်းသတဲ့. သူ့ရဲ့ အိုမင်းချိနဲ့နေတဲ့ အဖေဖြစ်တဲ့သူကို တောထဲမှာ သွားမပစ်ဘဲ အိမ်ပေါ်မှာ ခေါ်တင်ပြီးကျွေးထားလို့ သူတို့ ဆင်းရဲနေရတာပေါ့… သိတယ်မဟုတ်လား. နားမီးတောက်အောင်ကို နားပူနားဆာလုပ်တာပေါ့ဗျာ.
နောက်ဆုံးမှာတော့ သားဖြစ်တဲ့သူလည်း မခံနိုင်တော့တာနဲ့ အဖေအိုကြီးကို တောထဲမှာ သွားပစ်ဖို့ ကြံရတော့တာပေါ့. အစားအသောက်တစ်ချို့နဲ့ လိုလိုမယ်မယ်သုံးနိုင်မယ့် ပစ္စည်းလေးတွေကို သေသေချာချာထုတ်ပိုးပြင်ဆင်နေတာပေါ့ဗျာ…
အဲဒီ့အချိန်မှာ အဘိုးကြီးဟာ သူ့ရဲ့ မြေးလေးနဲ့ ဆော့နေရှာသတဲ့. ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာကို သူရိပ်မိသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ မျက်ရည်ဝဲနေတာပေါ့ဗျာ. သူချစ်တဲ့ မြေးလေးနဲ့ တစ်သက်လုံး ခွဲရတော့မယ်လေဗျာ..
မြေးလေးက အဘိုးကိုမေးတာပေါ့. အဘိုးလုပ်တဲ့သူကလည်း ကြည့်ကောင်းအောင်ဖြေရှာသတဲ့. အဘိုးဆီက ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေကို မရတော့ မြေးလုပ်တဲ့သူကလည်း သူ့ရဲ့ အဖေဆီကိုသွားပြီးမေးတာပေါ့.
“ဖေဖေ.. ဖိုးဖိုးကို တောထဲမှာ သွားပြီး တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့မလို့ဆို…”
အဖေလုပ်တဲ့သူကလည်း မျက်နှာမကောင်းလျက်က ခေါင်းညိတ်ပြရှာသတဲ့.
ကလေးငယ်က သူလည်း အဖိုးကို လိုက်နှုတ်ဆက်ချင်တယ်လို့ ခွင့်တောင်းပြီး တောထဲကို အတူလိုက်ခဲ့သတဲ့..
ဒီလိုနဲ့ သားအဖသုံးယောက်လည်း တောထဲကို ထွက်သွားကြသတဲ့
အဖိုးလုပ်တဲ့သူကို ထားခဲ့မယ့်နေရာကိုလည်းရောက်ရော ကလေးငယ်ရဲ့ အဖေဟာ နေရာထိုင်ခင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင် ရှင်းလင်းသုတ်သင်သတဲ့. ပစ္စည်းတွေကို နေသားတကျ ထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဖိုးအတွက် အိပ်ယာကို ကလေးငယ်ရဲ့ အဖေလုပ်တဲ့သူဟာ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ပေးသတဲ့. နောက်ဒီလိုလုပ်ခွင့်မှ မရှိတော့တာကိုး.
ဂွမ်းစောင်လေးတစ်ထည်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ဖြန့်ခင်းနေတာကို ကလေးလေးက မြင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုပြောသတဲ့…
“ဖေဖေ. အဲဒီ့ဂွမ်းစောင်ကြီးကို တစ်ပိုင်းပိုင်းထားလိုက်ပါလား..”
“သားတို့မိသားစုက ဆင်းရဲတယ်လေ. အဖိုးအတွက်လည်း ဒီလောက်ကြီးတဲ့ စောင်ကြီး မလိုလောက်ပါဘူး။ တစ်ပိုင်းကို ဖြတ်ပြီး သားအတွက် သိမ်းထားပေးရင် သားကြီးလာတဲ့နောင်တစ်ချိန် အဖေ့ကို တောထဲမှာ ဒီလိုလာထားရင် အသုံးဝင်မှာပေါ့…”
အဖေလုပ်တဲ့သူဟာ ဘာမှ မပြောနိုင်ရှာတော့ပဲ မျက်ရည်တွေ တွင်တွင်ကြီးသာ ကျလာတော့သတဲ့…..
အဲဒီ့နောက်မှာတော့ သူဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ လက်ကိုဆွဲ. အဖိုးကို ကျောပိုးပြီး ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ အိမ်ကို ပျော်ပျော်ပါးပါး ပြန်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်…
စာသားများ မတိကျပါ. ဖတ်ခဲ့ဖူးသော ပုံပြင်လေးအား မိမိကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် ပြန်လည် တင်ပြထားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်…
“ညီမလေးက အချစ်ကို ကိုးကွယ်သတဲ့လား” တဲ့.
ဘာလို့မေးတာလဲ. ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေရှိနေလဲ ဆိုတာသိချင်ရင်တော့ download လုပ်ပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့နော်.
ဒီညတော့ မအိပ်ခင် Yanni ရဲ့ Piano လက်သံလေးကို နားထောင်ချင်လာတာနဲ့ youtube website ကိုသွားပြီး ရှာကြည့်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလည်း ခဏခဏသွားကြည့်နေကြပါပဲ။
ဒီတစ်ခါတော့ Video အသစ်တစ်ခုတင်ထားတာကို တွေ့ရတယ်။ နားထောင်ပြီးပြီးချင်းပဲ ကြိုက်သွားတာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိသတ်အတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ… အရင် ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတာတွေထဲက ကြိုက်တာတွေကိုပါ ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်. ခံစားသက်ဝင်နိုင်ကြပါစေဗျာ…
Yanni အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီ website မှာ သွားကြည့်ပါ…
အကြမ်းဖျင်းပြောပြရရင်တော့ သူက ဂရိနိုင်ငံသားပါ။ University of Minnesota, U.S.A မှာ Psychology နဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ သူဝါသနာပါတဲ့ Piano နဲ့ပဲ ဂီတလောကထဲကို ခြေစုံပစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂီတကို ဆရာအကူအညီမပါဘဲ သူ့ဘာသာသူ သင်ကြားတတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
လက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ Music Concert ကြီးတွေလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံသောက်သောက်လဲ ၀င်နေတဲ့ ဂီတပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ…
ကျောင်းပညာထက် ၀ါသနာပါရာကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ပြီး အောင်မြင်သွားကြတဲ့ ပါရမီရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ…
RainMaker...(Very Famous Song!)
Reflections of Passion (MTV Version)
ဘယ်က စာကလေးကျွန်တော့် အခန်းထဲ ၀င်လာပါလိမ့်လို့ တစ်ချက်ကြောင်သွားသေးတယ်။ နောက်မှ သိလိုက်တယ်. ဩော်. ညက ကျွန်တော့်ရဲ့ ဟန်းဖုံးကို Ring Tone အသံပြောင်းထားတာပဲ. အသက်ကလေးနည်းနည်းရလာတော့ လူက မှတ်ဥာဏ်သိပ်မကောင်းချင်တော့ဘူးဗျာ. ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မှတ်ဥာဏ်သိပ်ကောင်းတယ်လုိ့ မောင်နှမတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေက ချီးကျူးခဲ့ကြဖူးတယ်.
ခုတော့လည်း မှတ်ရတာတွေသိပ်များလာလို့ ခေါင်းထဲက memory တွေ မနိုင်ချင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်။ အချိန်ရရင် အသုံးမကျတော့တဲ့ ခံစားချက်တွေကို လျှောက်ပြီးသိမ်းမှတ်ထားတတ်တဲ့ ဦးနှောက်ကို နည်းနည်းလောက်ပြန်ပြီး Format ပြန်ချရဦးမယ်။
နံပါတ်ကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ Unknown Number တဲ့. ဘယ်သူများပါလိမ့်…
“ပေား. Good Morning ကိုရန်အောင်. ဘာတွေလုပ်နေလဲ”
ဒီအသံကို ဒါပထမဆုံး ကြားဖူးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရိုင်းသွားမည်စိုး၍ ဘာမျှဆက်မမေးသေးဘဲ Follow လိုက်ပေးလိုက်သည်။
“Morning ပါဗျာ. ခုလေးတင် မနက်စာ စားပြီးတယ်ဗျ. အစ်မက..ဟို..ဘယ်သူလဲ မသိဘူးနော်…”
“ဟားဟား…ဆောရီး.. ကျွန်မလည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့သာ နှုတ်ဆက်လိုက်တာ. ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ဖို့ မေ့သွားတယ်… ကျွန်မ Mayvelous ပါ… Fiji က Blogger လေ…
“What? Mayvelous? You gotta kidding me! ဘယ်ကဘယ်လို ကျွန်တော့်ဖုံးနံပါတ်ရပြီး ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုဆက်နေတာလဲ…ဘယ်မှာလဲ… New York မှာလား”
“အမယ်လေး..မေးခွန်းတွေကများလှချည်လား. ဘယ်ကစဖြေရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး..
အိုကေ. One by one ပြောမယ်. ကျွန်မဒီကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်က ရောက်တယ်. Seminar လာတက်တာ.. ၃ ပါတ်လောက်ကြာလိမ့်မယ်. ခု အိမ်ကနေထွက်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ဆက်နေတာ. ဖေဖေ့အသိတစ်ယောက်အိမ်မှာ တည်းတယ်. ဖုံးနံပါတ်ကတော့ ကိုရန်အောင်က Facebook မှာတင်ထားတာပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်မေ့နေပြီလား.. ဒီအိမ်က ဦးလေးကြီးရဲ့ သားကဒီမှာ ကျောင်းတက်နေတာလေ. အဲဒါသူ့ Account ကနေတစ်ဆင့် ကိုရန်အောင့် Profile ကို ၀င်ကြည့်လိုက်တာ…ဟုတ်ပြီလား… Mystery solved?...”
“ဟုတ်ပြီ. ဟုတ်ပြီ. ခုမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်. ဒါဆိုရင် ညက ကျွန်တော့် Blog မှာ Cbox ထဲမှာ လာအော်သွားတာ New York ကနေ အော်နေတာပေါ့လေ…ဟုတ်လား”
“ဟုတ်ပါ့ရှင်.ဟုတ်ပါ့။ ခုဖုန်းဆက်တာလည်း အဲဒီ့ကိစ္စပဲ. မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်လည်းဖြစ်သွားအောင်၊ အဲဒီ့ ကိုတာနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့ ကိစ္စကိုလည်း နည်းနည်းလောက် ဆွေးနွေးစရာရှိတာနဲ့ ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်တာ. Email ပို့ရင် တော်ကြာ Junk Mail Box ထဲဝင်သွားမှာစိုးလို့လေ..”
“Gotcha! အိုကေ. ဘယ်မှာဘယ်လိုတွေ့ချင်လဲ.”
“ကျွန်မကဒီနေ့ ၁၀ နာရီမှာ United Nations ဘက်ကို သွားစရာရှိတယ်. အဲဒါတစ်ခါတည်း ထွက်လိုက်မလားလို့”
“အဆင်ပြေသားပဲဗျ. ကျွန်တော်လည်း ဒီနေ့ကျောင်းဘက်ကို မသွားခင် New York Library မှာ စာဝင်ဖတ်မလို့. UN နဲ့ Library က လမ်းကြောင်းသင့်ပါတယ်. By the way, New York ရောက်ဖူးလား. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သွားတတ်တယ်ပေါ့..”
“အင်း ၂ ခေါက် ၃ ခေါက်လောက်တော့ ရောက်ဖူးပါတယ်. သိပ်ပြီးတော့ ထွေထွေထူးထူး အပြောင်းအလဲမှ သိပ်မရှိတာ. Subway ရထားစီးတတ်ရင် ဘယ်နေရာသွားသွားရောက်တယ်လေ.ဟုတ်တယ်မလား.”
“ဟုတ်ပါ့ဗျာ. ဒါဆိုရင် ဒီလိုလုပ်. Grand Central Station အပြင်ဘက် UN ဘက်ကိုသွားတဲ့ Bus ကားဂိတ်နားမှာ ၉ နာရီမှာ စောင့်နေလိုက်. ခု ၈ နာရီခွဲ ဆိုတော့ အဲဒီ့ကို ၉ နာရီ မထိုးခင် ကျွန်တော်ရောက်နေလိမ့်မယ်..အိုကေတယ်နော်..”
“အိုကေ. အဲဒီ့နေရာ ကျွန်မသိတယ်..ကောင်းတယ်..ကောင်းတယ် အဲဒီ့မှာ ၉ နာရီတွေ့မယ်..”
“Alright, see you there at 9! Bye!”
Grand Central Station အပြင်ဘက်ကို ထွက်လိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း လူအုပ်ကြီးက အရှိန်နဲ့ ဦးတည်ချက်အမျိုးမျိုးကို စီးမျောနေကြသည်။ Bus ကားဂိတ်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ လူနည်းနည်းရှင်းနေသည်။ ခုလေးတင်ကားတစ်စီးထွက်သွား၍ လူအကုန်ပါသွားခြင်းဖြစ်မည်ထင်သည်။ လက်ပတ်နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၉ နာရီထိုးဖို့ ၅ မိနစ်လောက်တော့လိုနေသေးသည်။
လမ်းထောင့်မှာရှိနေသော သတင်းစာပုံးလေးထဲမှ AM New York သတင်းစာကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး Bus ကားဂိတ်ဘက်သို့ သွက်သွက်လေးကူးလိုက်သည်။ လမ်းတစ်ဖက်သို့ရောက်ရောက်ချင်း ငှက်ကလေးက ထအော်ပါတော့သည်။
“ဟဲလို ကိုရန်အောင် ကျွန်မရောက်ပြီ. ကိုရန်အောင်ရော ရောက်ပြီလားလို့ လှမ်းဆက်လိုက်တာ”
“ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် ကားဂိတ်ဘက်ကို ခုလမ်းလျှောက်နေပါတယ်. မမေက ဘယ်နေရာမှာလဲ”
“Oh! I can see you now! ရပြီ. ကျွန်မ ကိုရန်အောင့်ကို လှမ်းတွေ့နေရပြီ”
“အိုကေဗျာ. ကျွန်တော်ကတော့ မမေကို မတွေ့ရသေးဘူး”
စကားပြောရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့မှ လမ်းတစ်ဖက်မှ ကူးလာနေသော မမေကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်ရပါတယ်. အပြင်မှာတွေ့ရသော မမေနှင့် Blog Profile ထဲမှ မမေ သိပ်မကွာခြားပါ. ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော် လွယ်ကူစွာ မှတ်မိခြင်းဖြစ်ပါသည်…
“ရောက်နေတာ ကြာပြီလား ကိုရန်အောင်”
“အိုကေ. ဘယ်သွားပြီး စကားပြောမလဲ. ကိုရန်အောင်က New Yorker ကြီးဆိုတော့ ဒီနေရာတွေ ကျွမ်းမှာပေါ့”
“အဲလောက်ကြီးလည်း မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ. ဟိုဘက် Block မှာ MacDonald ရယ်၊ Starbuck Coffee ဆိုင်ရယ် ရှိတယ်. ဘယ်ဆိုင်ထိုင်ချင်လဲ.”
“MacDonald ထိုင်ရအောင်လေ. ကျွန်မလည်း မနက်စာ ဟုတ်တိပတ်တိ မစားခဲ့ရသေးဘူး”
ဆိုင်ထဲတွင်လူသိပ်မရှုပ်၍ တော်သေးသည်။ နို့မို့ဆို စကားပြောဖို့နေနေသာသာ၊ ကိုယ့်အသံပင် ကိုယ်မကြားရဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။ လမ်းဘက်ကို မျက်နှာမူနေသော ထောင့်တစ်ခုမှ စားပွဲတွင် မမေကို ၀င်ထိုင်စေလိုက်သည်။
“နေပါ. မမေရာ. မမေက ဧည့်သည်ပဲ. ကျွေးချင်ရင်တော့ ကျွန်တော် Fiji ကို လာလည်မှပဲကျွေးတော့လေ..ဟားဟား..”
“Fiji ထိလာစရာမလိုပါဘူးရှင်. နောက်တစ်ခေါက်ကျရင် ကျွန်မကျွေးမယ်. ဟုတ်ပြီလား.ခုလောလောဆယ် သိပ်အငြင်းအခုန် မလုပ်ချင်ဘူး ခဏနေငြင်းစရာတွေ အများကြီးရှိလို့ ရှုပ်ကုန်မှာစိုးလို့..”
တော်တော်လည်းနောက်တဲ့ မမေ။ မမေအတွက် Hamburger နဲ့ Coffee၊ ကျွန်တော့်အတွက် Coffee တစ်ခွက်ကိုမှာပြီး လင်ဗန်းထဲတွင်ထည့်၍ စားပွဲဆီသို့ပြန်လာခဲ့သည်။
“ကဲ.ပြောပါဦးဗျာ. ဘာ seminar လာတက်တာလဲ”
“UNEP ကလုပ်တဲ့ International Seminar on Environmental Accessibility ကို လာတက်တာပါ.”
“UNEP ဆိုတာက United Nations Environment Programme ကိုပြောတာပါ. ဒီကိုလာဖို့ အားလုံးကို သူတို့ပဲ Sponsor လုပ်တာလေ…”
“Good တယ်ဗျာ. ကျွန်တော် ဒီမှာသာနေတာ. အဲဒါတွေ တစ်ခုမှ မသိဘူး…”
“ဩော်. ကိုယ့် Field နဲ့ ကိုယ်ပဲလေ. ကိုရန်အောင်ရဲ့. ကိုရန်အောင် သိတာတွေနဲ့ ကျွန်မတို့သိတာတွေ မတူသလိုပဲပေါ့…ဟုတ်တယ်မလား…”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ..ကျွန်တော့်ရဲ့ Blog ကို ဘယ်လိုတွေ့တာလဲ ပြောပါဦး..”
“Myanmar Blogger Directory ထဲမှာလည်း ပါတယ်… ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ Cbox ထဲမှာလည်း ကိုရန်အောင့် Address ကိုတွေ့တယ်လေ. ဒီလိုပဲ သူများတွေရေးတဲ့ Blog တွေလိုက်ဖတ်ကြည့်ရင်း တွေ့တာပဲ.. ကိုရန်အောင်လည်း ကျွန်မရဲ့ Blog ကို ဘယ်လိုတွေ့လဲ..”
“ဟဲဟဲ.. Same answer…”
“ဩော်. တော်တော်ကို စဉ်းစားပြီးတော့ကို ဖြေလိုက်တာပဲနော်..”
အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ကျွန်တော်နဲ့ မမေတို့ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက ငယ်သူငယ်ချင်းများ ပြန်တွေ့သည့်ပုံစံမျိုး နွေးထွေးနေခဲ့လေသည်…
“ကဲ. မမေက ကျွန်တော့်ရဲ့ post ထဲက စာကို ဘယ်လိုမြင်တာလဲ ပြောပါဦး..”
“ဒီလိုလေ ကိုရန်အောင်ရဲ့ “ကိုတာနှင့် ကျွန်တော် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ခြင်း” ဆိုတဲ့ post မှာ ဒီလို ရေးထားခဲ့တယ်နော်…
အဲဒီ့မှာ နံပါတ် ၅ ကို ကိုရန်အောင်က ဒီလို ဘာသာပြန်ထားတယ်လေ..
“ကိုယ်က အများကို နားလည်ရန်၊ ကိုယ့်ကို အများက နားလည်ရန် ကြိုးစားတယ်”..တဲ့. အဲဒါ နည်းနည်းလောက်ထောက်မနေဘူးလား…
ကျွန်မမြင်တာက ကိုယ်က သူများကို နားလည်အောင် ကြိုးစားမှ၊ သူများကိုယ့်ကို နားလည်မယ်။ အဲဒါကိုပြောတာ. သူတို့ ၂ ခုက အဓိပ္ပါယ် မတူကြဘူးလို့ ကျွန်မထင်တယ်.”
“ဟုတ်ကဲ့. ဆက်ပြောပါ. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တစ်ခုတော့ အရင်ကြိုပြောထားချင်ပါတယ်. အဲဒီ့စကားတွေကို ကျွန်တော် ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ပါဘူး. ဆရာကိုတာရဲ့ မူရင်းစာအုပ်ထဲကအတိုင်း ကူးချထားတာပါ.. ကျွန်တော်လည်း မမေတွေးသလိုတွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာကိုတာ ရှင်းပြထားတာကို ပြီးရင် ကျွန်တော် ကိုးကားပြီးပြောပြမယ်နော်. လောလောဆယ် မမေပြောတာကို အရင် နားထောင်ချင်ပါတယ်…”
"လူတွေက ကိုယ်ကသူများကို နားလည်အောင် မကြိုးစားကြဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုသာ သူများတွေက အရင် နားလည်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း သူ့ကိုယ်နားမလည်၊ ကိုယ့်သူနားမလည်နဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေက ပိုရှုပ်ထွေးနေတယ်လေ. ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကို သူများတွေက နားလည်စေချင်ရင် သူများတွေကို ကိုယ်က အရင်နားလည်ပေးသင့်တယ်" လို့ ကျွန်မထင်တာပါ.
"For you to understand others, others gotta(try to) understand you."
အဲဒီ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်နေတယ်လေ. ကိုယ်ကသူများတွေဆီက အရင် မျှော်လင့်သလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်. သိပ်သဘာဝမကျဘူး။ အဲဒါကို ကျွန်မ နည်းနည်း အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိတာပါ
“အိုကေ. ကျွန်တော့်အမြင်ကို မပြောခင် ဆရာကိုတာရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ကို ကျွန်တော်ကိုးကားချင်ပါတယ်။ အဲဒီ့စာပိုဒ်ကို ကျွန်တော် မမေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ထည့်ပြောလို့ရအောင် ဒီမနက်တင် ဖုန်းပြောပြီးပြီးချင်း ကူးယူလာခဲ့တယ်. ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်…”
“ကိုယ်က အများကိုနားလည်အောင်၊ အများပြောတာကို ကိုယ်ကနားထောင်တတ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများစု နားထောင်တာဟာ၊ နားလည်အောင် နားထောင်တာမဟုတ်ပါ။ တုံ့ပြန်ဖို့သာ နားထောင်ကြတာ။ လူနည်းနည်းကသာ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်တာ။ အဲဒီ့လူနည်းစုကသာ တစ်ခြားလူရဲ့စိတ်ကို သိဖို့၊ တစ်ခြားလူရဲ့ ကမ္ဘာထဲကို လိုက်ကြည့်ဖို့၊ တစ်ခြားလူရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ဖို့၊ ခံစားမှုအတွက်၊ အဓိပ္ပါယ်အတွက်၊ အပြုအမူကို သိနားလည်ဖို့အတွက် နားထောင်နိုင်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ကို အများကနားလည်ဖို့ ကြိုးစားချင်ရင်တော့ ဂရိဒဿနက စကားသုံးလုံးကို သတိရှိနေရလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ အီသုိ့စ်၊ ပသို့စ်၊ လိုဂို့စ် (Ethos, Pathos, Logos) ဆိုတဲ့ စကားလုံး သုံးလုံးပါ။
အီသို့စ်ဆိုတာ ခင်ဗျားရဲ့ ပုဂ္ဂလဂုဏ်ရည်၊ ပသို့စ်ကတော့ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာ၊ လိုဂို့စ်ကတော့ ယုတ္တိပါ။ စာရိတ္တ၊ အကြင်နာ၊ ယုတ္တိလို့ အစဉ်လိုက်မှတ်ရမှာပါ။ လူအများ ကိုယ့်ကို နားလည်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ယုတ္တိကို အရင်ရှင်းပြနေကြတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ပုဂ္ဂလဂုဏ်ရည်နှင့် ကိုယ်က သူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစိတ်က အရင်လာရမှာ။ ယုတ္တိတွေ ပြောနေရုံမျှနှင့် မအောင်မြင်နိုင်ပါ…”
“ကျွန်တော်က ဒါတွေထိမရေးဖြစ်လိုက်ခဲ့ရတာက စာဖတ်သူကို အမြည်းသဘောပဲပေးပြီး ကျန်တာကို သူတို့ဖာသာ ဆက်ဖတ်စေချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် အမှတ်မထင်ဘဲ အဲဒီ့ နံပါတ် ၅ က ဘာသာပြန်ရတာ အဓိပ္ပါယ် ၂ ခွလာထွက်နေတယ်။ ကျွန်တော် သတိထားမိလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မူရင်းစာရေးသူရဲ့ အာဘော်ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီတိုင်းပဲ ချပြလိုက်ချင်တယ်။ မမေက ခုလို အားတက်သရော ထောက်ပြဆွေးနွေးလာတော့ ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာ…
ကဲ. ဒီတော့ ဆရာကိုတာရဲ့ စာပိုဒ်လေးကို ဖတ်ကြည့်ရင် မမေ မရှင်းတာတွေ ရှင်းလောက်ပြီထင်ပါတယ်ဗျာ..”
“အင်း. ရှင်းတော့ရှင်းသွားပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကိုရန်အောင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆကို ကျွန်မသိချင်သေးတယ်။ ဒီတိုင်းကြီးတော့ ကျွန်မကို ဆရာကိုတာနဲ့ လွှဲမထားခဲ့နဲ့လေ…”
“ဟားဟားဟား..ကောင်းပါပြီဗျာ..မမေက တော်တော်ကို ပညာတတ်ပီသတာပဲ. မရမကကို မေးတာပဲ.”
“ဩော်. ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ရပါဘူး. Reasoning is the foundation of maturity လို့ ကျွန်မမှတ်သားခဲ့ဖူးတယ်လေ. ဒါကြောင့် စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း Critical Thinking ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် ကျွန်မစဉ်းစားတယ်. အရောင်တွေ၊ ဖွဲ့နှောင်မှုတွေအောက်က တတ်နိုင်သလောက် လွတ်မြောက်အောင်စဉ်းစားတယ်. ဒါမှ စစ်မှန်တဲ့ အမှန်တရားနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်မယ်လေ. ဒါက ကျွန်မရဲ့ Personal Opinion ပါ..”
“ဟုတ်တယ်ဗျာ. That’s absolutely right! ကျွန်တော်လည်း အဲဒီ့အတိုင်းပဲ ကျင့်သုံးတယ်. ဒီတော့ စကားကိုပြန်ကောက်လိုက်ရရင်. ဆရာကိုတာရှင်းပြထားတာကို ကျွန်တော် ဥပမာလေးတစ်ချို့နဲ့ သက်သေပြချင်တယ်..”
“သိပ်ကောင်းတဲ့ idea ပဲရှင်. ဆက်ပြောပါ…”
“ကိုယ်က အများကိုနားလည်အောင်၊ အများပြောတာကို ကိုယ်ကနားထောင်တတ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများစု နားထောင်တာဟာ၊ နားလည်အောင် နားထောင်တာမဟုတ်ပါ။ တုံ့ပြန်ဖို့သာ နားထောင်ကြတာ။ လူနည်းနည်းကသာ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်တာ။ အဲဒီ့လူနည်းစုကသာ တစ်ခြားလူရဲ့စိတ်ကို သိဖို့၊ တစ်ခြားလူရဲ့ ကမ္ဘာထဲကို လိုက်ကြည့်ဖို့၊ တစ်ခြားလူရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ဖို့၊ ခံစားမှုအတွက်၊ အဓိပ္ပါယ်အတွက်၊ အပြုအမူကို သိနားလည်ဖို့အတွက် နားထောင်နိုင်ကြပါတယ်..”
အဲဒီ့စာပိုဒ်မှာပဲကြည့်.“တုံ့ပြန်ဖို့သာ နားထောင်ကြတာ” တဲ့. ဘယ်လောက်သပ်ရပ်တဲ့ စာသားလေးလဲ.
ဟုတ်တယ်ဗျ. လူတွေကနားထောင်တဲ့ အခါမှာ ဘယ်နေရာရောက်ရင်တော့ ငါထင်ထားလေးတွေကို ဘယ်လို ထည့်ပြောလို့ရပြီဆိုတဲ့ မျှော်လင့်စိတ်နဲ့ နားထောင်တာ. တစ်ချို့လူတွေဆို နားသာထောင်နေတာ၊ ပါးစပ်က လှုပ်ရွလှုပ်ရွနဲ့၊ ၀င်ပြောဖို့ကိုသာစောင့်နေတာ။ တစ်ဖက်လူရဲ့ စကားကို ဖွင့်ထားတဲ့ စိတ်နဲ့ နားမထောင်တတ်ကြဘူး။ အဲဒီ့မှာ သူ့ရဲ့ အတ္တ (Ego) ကို တွေ့နေရပြီ.လူတစ်ယောက်ကပြောတာကို ကိုယ်ချင်းစာအကြင်နာစိတ်နဲ့ နားမထောင်တတ်တဲ့သူတွေကြောင့် လူမှုဆက်ဆံရေးမှာ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတွေ၊ “ငါ့ကို ဘယ်သူမှ နားမလည်ကြဘူး” ဆိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးတွေ လူတွေမှာ ဖြစ်လာရတာပေါ့…
ဆက်ပြောရရင်တော့ “လူနည်းနည်းကသာ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်တာ..” ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်သူ၊ အကြင်နာစိတ်နဲ့ နားထောင်တတ်သူက တော်တော်ကိုရှားတယ်.
ဒါပေမယ့် ချန်ထားလို့မရတဲ့ နောက်ထပ်ပြဿနာ တစ်ခုကိုလည်း ထည့်ပြောချင်တယ်ဗျ. တစ်ချို့လူတွေကျတော့ အတ္တကိုက တော်တော်ကိုကြီးကြတယ်။ ကိုယ်ကချည်းပဲပြောမယ်။ နားထောင်ဖို့ဆိုတာကို သူတို့ တစ်ခါမှ ထည့်မစဉ်းစားတတ်ခဲ့ကြဘူးနဲ့တူပါတယ်။ အဲလို လူစားမျိုးရဲ့စကားကိုချည်းပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့နားထောင်နေရတဲ့ အခါမှာလည်း နားထောင်ရသူအတွက် တရားမျှတမှုမရှိတော့ဘူး။
အပေးအယူလုံးဝမှ မရှိတာ.. ကိုယ်ကချည်းပဲယူမယ်ဆိုတော့ ပြဿနာဖြစ်လာပြီပေါ့။ အဲလိုလူစားမျိုးတွေကိုလည်း လောကကြီးက အလိုလိုဒဏ်ခတ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုခတ်လဲဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို အထီးကျန်ဆန်ပေးလိုက်တယ်လေ။ သူတို့မှာ အဖော်ဆိုတာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနည်းသွားတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ တစ်ချို့တွေဆိုရင် ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ပြည့်စုံပါရဲ့နဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု မရတာ ဒီအချက်ကို သူတို့လျစ်လျူရှုခဲ့လို့ပဲ.
စိတ်ပညာစကားလုံးတစ်ခုကို အဌားယူသုံးရရင် သူတို့က သူတို့ကိုယ်သူတို့ Centralized လုပ်ပစ်လိုက်ကြလို့လေ။ ဆိုလိုတာက လောကကြီးမှာ သူတို့သာ ဗဟိုချက်မ၊ သူတို့သာ အရေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ အတ္တသိပ်လွန်ကဲသွားလို့ပေါ့။
ဒီတော့ အဲလိုလူစားမျိုးတွေနဲ့ အပေးအယူမျှအောင် စကားပြောဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့ အဲလိုလူစားမျိုးတွေကို သူတို့ရဲ့ အမှားကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ အချိန်တစ်ခု ပေးထားရတယ်။ အဲဒီ့အချိန်ကိုရောက်မှာ ဒက်ခနဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချက်ကို ပြောပြီး သူ့အမှားကို သူမနာအောင် စေတနာရှေ့ထားပြီး ပြောပြလိုက်ရတယ်။
အဲဒီ့မှာ သူတုိ့ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြတာပဲ။ အဲဒါသူတို့ဘ၀ရဲ့ အလှည့်အပြောင်း (or) Turning Point ပဲဗျ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း သေသည်ထိ ကိုယ့်အတ္တကို အဖော်လုပ်သွားတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေ…
ဒီတော့ နောက်ထပ်စကားတစ်လုံးကို ထပ်ရှင်းရတော့မယ်. “အတ္တ” တဲ့.
ကျွန်တော်တို့ အတ္တကင်းလို့မရပါဘူး။ ရှိရပါမယ်။ အတ္တရှိမှ အောင်မြင်ချင်စိတ်တွေ ရှိလာဖြစ်လာရတာပါ. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထားတဲ့ အတ္တဟာ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဦးတည်ထားဖုိ့ကတော့ တော်တော်ကို သတိထားဖို့လိုတယ်။
“ငါ့ကိုယ်ငါ အတော်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်.
ငါ့သားသမီး၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ဆွေမျိုး၊ ငါ့နိုင်ငံကို သူများတွေထက်သာအောင် ကြိုးစားပြမယ်.
Blog တွေထဲမှာ ငါ့ရဲ့ Blog ကို အလှဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပြမယ်…”
ဒါတွေဟာလည်း အတ္တတွေပါပဲ. အပြစ်မရှိပါဘူး။ ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဦးတည်နေမှာမို့လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်နေတာက အတ္တဆိုတဲ့ စကားလုံးကြားလိုက်တာနဲ့ အပျက်ဘက်ကို တွေးမိနေတတ်ကြလို့ပါ…ဒါကြောင့်တစ်ခါတစ်လေကျရင် အင်္ဂလိပ်လို ထည့်ပြောရတာက အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုထိရောက်စေသလိုမျိုးဖြစ်တတ်တာကို ခံစားမိဖူးကြမှာပါ…
အဲဒီ့ အတ္တက သိပ်လွန်ကဲလာပြီး သူများတွေအတွက်ကို ထည့်မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာရင်တော့ ခင်ဗျားရဲ့ အတ္တဟာ အရုပ်ဆိုးသွားပြီ. အဲဒါ point ပဲ. လူမှာ အတ္တ လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်မြှင့်တင်ချင်စိတ်ကို မွေးဖွားပေးနိုင်တဲ့ တွန်းအားတစ်ခုလိုတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ တွန်းအားဟာ တစ်ခြားလူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မထိခိုက်မနစ်နာစေရဘူး..အဲဒါ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ အတ္တအကြောင်းပဲ.
“ကိုယ်က အများကိုနားလည်အောင်၊ အများပြောတာကို ကိုယ်ကနားထောင်တတ်ရတယ်…”
ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တကို အတိုးအလျှော့လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်လည်းပြောပိုင်ခွင့်၊ ငြင်းဆန်နိုင်ခွင့်ရှိသလို တစ်ဖက်လူမှာလည်း အဲဒီ့အခွင့်အရေးရှိသင့်တယ်လို့ သိထားပြီး စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ အင်မတန်မှ လှပတဲ့ နားလည်မှုတစ်ခု ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လေ.
Mutual Understanding ဆိုတာ ဒါပဲ. “ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ အမြင်တူစရာမလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် အတူတကွ ယှဉ်တွဲရပ်တည်နိုင်တယ်” ဆိုတဲ့ အခြေခံ အချက်ပဲ အဲဒီ့အချက်ဟာ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ အိမ်ထောင်ဖက် စတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ အတွက်သာမက နိုင်ငံ အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးတွေ အထိ သက်ရောက်မှုရှိတယ်..
နောက်ဆုံးမှာ ဆရာကိုတာပြောသွားတဲ့ စကားလေးတွေကို ပြန်ကြည့်လေ.
“လူအများ ကိုယ့်ကို နားလည်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ယုတ္တိကို အရင်ရှင်းပြနေကြတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ပုဂ္ဂလဂုဏ်ရည်နှင့် ကိုယ်က သူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစိတ်က အရင်လာရမှာ။ ယုတ္တိတွေ ပြောနေရုံမျှနှင့် မအောင်မြင်နိုင်ပါ…”
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သဘောထားကို စပြောင်းလိုက်ဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က သူများကို အရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ မမေပြောတဲ့ အချက်ကို ကျွန်တော် မငြင်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူများကို နားလည်ဖို့ထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်ဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
သူများတွေကို တမင်နားလည်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ် သေသေချာချာ နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး တစ်ခြားသူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ ပြန်မြင်တတ်တာက လုပ်ရတာ ပိုလွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ ပိုပြီးတော့လည်း သဘာဝကျတယ်၊ လက်တွေ့ဆန်နိုင်တယ်လေ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ လူအမျိုးမျိုးအစားစားတွေ ဆက်တွေ့နေရဦးမှာပါ. ကိုယ်ကလည်း အဲဒီ့ အမျိုးအစားတွေထဲက တစ်မျိုးပါပဲလေ. အားလုံးကို လိုက်နားလည်နိုင်တာကတော့ အကောင်းဆုံးပေါ့. ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နားလည်တတ်ဖို့က အဓိကအချက်ပဲလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်…
ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်က ပြောရရင် ဘုရားရဟန္တာတွေ အာသဝေါကုန်ခမ်းဖို့ တရားကျင့်တဲ့ အခါမှာ ဘာကို ရှုကွက်ထားသလဲ
ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲ အဓိက ရှုကွက်ထားပါတယ်. ဟုတ်တယ်နော်…
ကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့ ဖြစ်ပျက်တွေကို အလုံးစုံ သိမြင်အောင်နိုင်ပြီးနောက်မှာ အာသဝေါကုန်ခမ်းပါတယ်။ အဲလို အရဟတ္တမဂ်ကို ဆိုက်ရောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ သူ့ကို တစ်ခြားဘယ်အရာကမှ မလွှမ်းမိုးနိုင်တော့ပါဘူး…
သူဟာလည်း လောကကြီးကို ကောင်းစွာ ရှုမြင်နားလည်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်သွားပါတော့တယ် အရဟတ္တမဂ်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူတာတောင် ပစ္စေကဗုဒ္ဓါဆိုတဲ့ တရားဟောပြနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ဘုရားဖြစ်တာမျိုးရှိနေသေးတယ်နော်. တရားဟောနိုင်ဖို့အတွက် ပညာပါရမီ တစ်ခုထပ်လိုလာပြန်ရောဗျ.
ဒါကိုလိုရင်းကောက်ရရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကို နားလည်ပြီးနောက် ကိုယ်ချင်းစာတရားကို အရင်းပြုပြီး တစ်ခြားလူပုဂ္ဂိုလ်သတ္တ၀ါတွေကို နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ အဲဒီ့မှာမှ တစ်ခါ ကိုယ်နဲ့ တွေ့ဆုံကြုံကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ လူတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းလေ့လာမှတ်သားထားခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ကို ကိုယ့်ဘက်ပါအောင် ဘယ်လိုဆွဲဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ ပညာကိုပါ တတ်မြောက်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်…
“တကယ်တော့ ကိုယ့်ပုဂ္ဂလဂုဏ်ရည်နှင့် ကိုယ်က သူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာ အကြင်နာစိတ်က အရင်လာရမှာ” ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးစာသားလေးက သိပ်ပြီးတော့ကို အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝနေပါတယ်ဗျာ…
အဲဒီတော့ မမေမြင်တာက သူများကို ကိုယ်ကနားလည်အောင် အရင်ကြိုးစားမှ ကိုယ့်ကို သူများတွေက နားလည်မယ်
ဆရာကိုတာ မြင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်နားလည်ပြီး သူများတွေကို နားလည်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်
ကျွန်တော်မြင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တစ်ခုနဲ့ အခြားသူတွေရဲ့အကြောင်းကို နားလည်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်…
စာသားလေးတွေက နည်းနည်းပဲ ကွဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့ကွဲသွားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာကိုပဲ မတူညီတဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံလေးတွေကို သတိထားမိရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်..
“ဟား... ကိုရန်အောင်က ဘာသာရေးတွေအထိပါ ဆွဲခေါ်သွားတော့ ကျွန်မတောင် ဘာဆက်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး… ဟုတ်တယ် ကိုရန်အောင်. ကျွန်မတို့တွေက ကိုယ်ပြောချင်တာကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်နေပြီး ကိုယ်လုပ်တာကိုပဲ အမှန်လို့ အချိန်တော်တော်များများမှာ ယူဆနေခဲ့ကြတယ်။ တစ်ဖက်လူကို နားလည်မှုပေးသယောင်ယောင်နဲ့ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်တွေကို သူ့ခေါင်းထဲ ရိုက်သွင်းပေးဖို့ အခွင့်အလမ်းကို ရှာနေခဲ့ကြတယ်။ ဒါဟာ အဖော်မဲ့ဖြစ်စေတဲ့ လမ်းစတွေပဲ.
ဒါပေမယ့် ကိုရန်အောင်. ကျွန်မစကားကပ်တယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့.
ကိုယ်ကသာ နားလည်ပေးနေပြီး ကိုယ့်ကို ဘယ်သူမှ နားမလည်ပေးဘူး။ ကိုယ်မှန်တယ် ဆိုတာကိုလည်း သေချာပေါက်သိနေတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…”
“Good question! ဘာသာရေးဘက်မှာ အကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခုရှိတယ်။
“သံဃာ့အား ဘုရားမလွန်ဆန်သာ” တဲ့. ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ သံဃာတွေ ဂိုဏ်းဂဏတွေကွဲကြတယ်။ ဘုရားရဲ့ စကားကို ဘယ်သံဃာကမှ နားမ၀င်ကြတော့ဘူး… ဘုရားက ဘာလုပ်တယ်ထင်လဲ.
အဲဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အချက်ကို သွားအထောက်အကူဖြစ်နေတယ်.
ဘယ်လိုမှ ပြောမရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ ကြုံလာရင် သူတို့ကို ရင့်ကျက်မှုရလာအောင် အချိန်တစ်ခုပေးလိုက်ရတယ် ဆိုတာလေ.
ဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက်မှ ဘုရားရဲ့ တန်ဖိုးကို သံဃာတွေ နားလည်လာပြီး ဘုရားကို ပြန်လည် တောင်းပန်ပင့်ဆောင်ကြရသတဲ့ဗျာ…
နောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာတော့ မြင်းတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့ ပုဏ္ဏားတစ်ယောက် (နာမည်သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ..) နဲ့ ဘုရားပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့ အခန်းမှာပေါ့…
မြတ်စွာဘုရား။ ။ အသင်ပုဏ္ဏား. သင်ကား မြင်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရာတွင် ဆရာတစ်ဆူဟု ငါကြားသိရသည်။ သင်၏ မြင်းများထဲတွင် မည်သို့မျှလေ့ကျင့် သင်ကြားပေး၍မရသော မြင်းမျိုးများ တွေ့ဖူးပါသလား။ အကယ်၍ တွေ့ခဲ့သော် သင်ဘယ်သို့လေ့ကျင့်ပေးသနည်း..
ပုဏ္ဏား။ ။ အရှင်ဘုရား. တပည့်တော်တွေ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့သော မြင်းမျိုးနှင့်တွေ့လျှင် ၄င်းအား ကျွန်ုပ် သတ်ပစ်ပါသည်.
မြတ်စွာဘုရား။ ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း…
ပုဏ္ဏား။ ။ ကျွန်ုပ်၏ နာမည်ကို ဖျက်ဆီးမည့် မြင်းမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်…
မြတ်စွာဘုရား။ ။ သင့်အား မြင်းပိုင်ရှင်မှ တရားစွဲဆိုခြင်း မပြုပေလော…
ပုဏ္ဏား။ ။ မပြုပါ. အရှင်ဘုရား. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြင်းအား လာရောက်အပ်နှံစဉ်ကပင် တစ်စုံတစ်ရာ ချွတ်ချော်မှုကြောင့် လေ့ကျင့်ပေးနေစဉ် မြင်းသေဆုံးခဲ့ပါက လျော်ကြေးငွေ ပေးရန်မလိုဟု ကနဦး သဘောတူညီချက်ရယူထားပြီးဖြစ်၍ပါ အရှင်ဘုရား…
မြတ်စွာဘုရား။ ။ ကောင်းလေစွ. ပုဏ္ဏား. ကောင်းလေစွ. သင်၏နာမည် ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခြင်းမှာကား အကြောင်းသင့်ပေစွ..
အဲလိုပြောပြီး မြတ်စွာဘုရားက ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူတယ်တဲ့.
ပုဏ္ဏားကလည်း စဉ်းစားတာပေါ့. အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ ရှိရမယ်လို့တွေးပြီး ခုလို ပြန်မေးသတဲ့…
ပုဏ္ဏား။ ။ အရှင်ဘုရားရဲ့ သာသနာတော်အတွင်းမှာရော မည်သို့မျှ ပြောဆိုဆုံးမ၍ မရသည့် သံဃာတော်များ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသလား အရှင်ဘုရား…
မြတ်စွာဘုရား။ ။ ရှိပေ၏. အသင်ပုဏ္ဏား…
ပုဏ္ဏား။ ။ သို့ဖြစ်လျှင် အရှင်ဘုရား အနေနှင့် မည်သို့ ဆက်ဆံပါသနည်း။
မြတ်စွာဘုရား။ ။ ငါလည်း သူ့ကို သတ်ပစ်၏…
“ဘုရားရှင်သည် ပါဏာတိပါတာကံကို မည်သို့မျှ ကျူးလွန်ခြင်း မပြုရာ. အဓိပ္ပါယ်ရှိရာ၏” လို့ တွေးပြီး
ပုဏ္ဏား။ ။ အကျယ်ချဲ့တော်မူပါဘုရား…
မြတ်စွာဘုရား။ ။ ထိုသို့သော အကြင်ရဟန်းအား ငါသည် ဥပေက္ခာပြုတော်မူလေသည်။ ထိုသို့ပြုခြင်းအားဖြင့် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အားသတ်သည်ဟု ငါဆို၏။
ဒီတော့ ဘုရားတောင်မှ ပြောဟော ဆုံးမလို့မရတဲ့ လူမျိုးတွေ လောကကြီးမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့ အခါမှာ သူတို့ဆီက နားလည်မှုကို မျှော်လင့်စောင့်စားနေလို့ မောသွားရုံပဲရှိပါမယ်။ သူတို့ကို ဥပေက္ခာပြုပြီး ကိုယ့်ဘ၀ထဲက သတ်ပစ်လိုက်ရပါမယ်လို့ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာပါ…
“Wow. Wow Wow. ကိုရန်အောင်က ဇာတ်နိပါတ်တွေ တော်တော်နိုင်နင်းတာပဲ. ဘယ်တုန်းကဘယ်လိုလေ့လာထားခဲ့တာလဲ…”
“ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ဘုရားစင်ပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့တဲ့ ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ “ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ” အတွဲတွေကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ. နည်းနည်း အရွယ်ရောက်လာတော့လည်း လက်လှမ်းမီရာ ဗုဒ္ဓ၀င်ဇာတ်နိပါတ်လေးတွေကို ဖတ်ရှုမှတ်သားခဲ့တယ်။ ခုတော့လည်း ထုတ်သုံးဖို့ အချိန်ရောက်လာတာပေါ့ဗျာ. မမေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ခုလို ကျွန်တော့်ကို ပြန်လည် digest လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးလို့လေ...
ကဲ. မမေရေ. ၁၀ နာရီလည်းထိုးတော့မယ်. ကျွန်တော်တို့ ဒီနေရာမှာ ရပ်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ. နော်..”
“ဟုတ်ပါ့ရှင်. စကားကောင်းနေလိုက်တာ. နာရီတောင် မကြည့်မိဘူး. ခုလို အချိန်ပေးရှင်းပြပေးတဲ့ အတွက်ရော. Blog မှာ Ebook လေးတွေ တင်ထားပေးတဲ့ အတွက်ရော အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်. ဆက်လက်ကြိုးစားသွားပါလို့ ကျွန်မ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…”
“ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်. မမေ မပြန်ခင် ထပ်တွေ့ကြပြီး စကားဆက်ပြောကြသေးတာပေါ့ဗျာ…
Haveanice day, Ma May!”
“Same to you and good luck, Ko Yan Aung!”
မမေ တကယ်တော့ နယူးယောက်ကို မလာခဲ့ပါ.
စိတ်ကူးထဲတွင် ခံစားရေးဖွဲ့ထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်.
ဒါကတော့ မမေရဲ့ Website ပါ. သွားလည်လိုက်ကြပါဦးနော်…
ဒီ post လေးကို Download လုပ်ထားချင်ရင်တော့...
Thinking About Thinkers...
ကိုယောဟန် ရဲ့ Blog မှာ ၀င်ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဒီ Video လေး ၂ ခုကိုတွေ့လာခဲ့တယ်။ အဲဒါနဲ့ youtube website ကို ဆက်သွားရင်းရှာကြည့်လိုက်တော့ နောက်ထပ် ၁ ခုပါ ထပ်တွေ့လာတာနဲ့ အားလုံးပေါင်းပြီး ဒီမှာ တင်ပေးလိုက်တယ်။
ကြည့်နေရင်းနဲ့ရော၊ ကြည့်ပြီးတော့ရော ဒီ Video Clipping လေးတွေကို ဖန်တီးပေးတဲ့ “ဟန်ထွန်း (maelone)” အမည်ရ မြန်မာလူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို မချီးကျူးဘဲမနေနိုင်အောင်ကို ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဗျာ…
ဒါကတော့ ကိုယောဟန်ရဲ့ Blog Address ပါ.
အလည်သွားလိုက်ကြပါဦး. သူ့ကဗျာလေးတွေကို “မိုးမခ အင်တာနက်ရေဒီယို” ကတောင်လွှင့်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျ.
ကျွန်တော်ပြောချင်သမျှ ကျွန်တော့် Blog အကြောင်း - ၂
အိပ်ယာထဲမ၀င်ခင် စာနည်းနည်းရေးချင်လာတာနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ပြန်ထိုင်မိတယ်. ကျွန်တော့်ဆီကိုလာလည်တဲ့သူတွေရဲ့ Blog Address တွေကိုလိုက်ကြည့်ရာက သူတို့ရဲ့ Blog တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းတွေကို သိလာရုံသာမက သူတို့နဲ့ Link ချိတ်ထားတဲ့ အခြားသော Blogger များအကြောင်းကိုလည်း လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်.
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ တကယ်ကို ကြိုးစားအားထုတ်ကြတာပဲ. ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိတယ်ဗျာ. နိမ့်ကျနေတဲ့ ဘ၀တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကိုယ်စီကိုယ်ဌ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်အောင်တတ်အောင် ကြိုးစားရမှာကတော့ ကိုယ့်တာဝန်ပဲလေ. ဒီတာဝန်ကိုကျေပွန်တဲ့ မြန်မာလူရည်ချွန်ပညာတတ်တွေအတွက် ကျွန်တော် ၀မ်းမြောက်မိတယ်
ကျွန်တော်လည်း blogger လောကထဲကိုရောက်လာတာ မကြာသေးပါဘူး။ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့တတ်တဲ့သူတွေ လုပ်ထားတဲ့ Blog Template တွေ၊ ရေးထားတဲ့ Computer ပိုင်းဆိုင်ရာ Post တွေကို ဖတ်ကြည့်ရင်း ကျွန်တော် အားငယ်ခဲ့ရဖူးတယ်။ Programming ဆိုလည်း ချောက်တီးချောက်ချက်၊ Hardware ပိုင်းလည်း ကျွန်တော်သိပ်မသိ၊ CSS Coding တွေဆိုဘာတွေရေးထားမှန်းကို နားမလည်၊ ကျွန်တော်တတ်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်မေးခဲ့ရဖူးတယ်။
ငါလုပ်တဲ့ Blog ဘယ်သူတွေ လာဖတ်မှာလဲ။ ငါ့ရဲ့ Blog ကဘယ်လောက်များ ဆွဲဆောင်မှုရှိမှာလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်အားငယ်စရာ အတွေးတွေနဲ့ပေါ့။ နောက်ပြီး စီးပွားရေးဆန်ဆန်လည်း တွေးမိသေးတယ်လေ။ ငါဒါတွေလုပ်နေလို့ ဘာအကျိုးထူးမလဲ။ ငါ့အတွက် ဘာပြန်ရနိုင်မလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့…
နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်အင်အားတစ်စုံတစ်ရာကို တွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူတိုင်းမှာ အလှကိုယ်စီရှိတတ်စမြဲပါ။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ အလှကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော် စိတ်ဓာတ်ညှိုးငယ်တာတွေကို အသာသိမ်းထားလိုက်ပြီး ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူ Blogger လောကကြီးထဲမှာ ကျင်လည်နေခဲ့ပြီ။
ကိုယ်ရသည်မရသည်ထက် ကိုယ်လုပ်ပေးနိုင်သည်၊ မပေးနိုင်သည်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးဖြတ်တတ်လာခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Template တွေ သိပ်ဆွဲဆောင်မှုမရှိပါ။ Banner ကိုလည်း idea တစ်ခုပေးထားတာကလွဲလို့ ပိုကောင်းအောင်မပြင်တတ်သေးပါ။ Blogging နဲ့ပတ်သက်လို့ ခက်ခဲနက်နဲတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ကျွန်တော်မဖြေနိုင်သေးပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ကျွန်တော်လေးစားတယ်။ ကျွန်တော်ပေးနိုင်တာတွေကို ပေးမယ်။ မပေးနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ သူတို့အတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့် source လေးတွေကို ကျွန်တော်ကြိုးစားရှာဖွေပေးမယ်။
အဲဒါတွေလုပ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဘာပြန်ရမလဲ။ အဲဒီ့မေးခွန်းကပြန်ဖြေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်…
Blog တစ်ခုကိုစလုပ်ဖို့ အားငယ်နေသူတွေလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီ Post လေးကိုဖတ်ပြီး အင်အားတစ်စုံတစ်ရာ ရရှိနိုင်ကြပါစေဗျာ…